Làlana Bangla, Phuket " Journey-Assist - mahaliana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Làlana Bangla, Phuket
Làlana Bangla, Thanon Bangla, Phuket
Fijery amin'ny lalana Bangla any Phuket. Vidin-javatra.
Lalana Bangla amin'ny sarintany. Ahoana no hahatongavana any.
Sary sy horonan-tsary Lalana Bangla
Hevitra momba Lalana Bangla (Hevitra momba ny Google)
Hevitra momba Lalana Bangla (Tripadvisor.ru)
Bangla Road (anarana ofisialy dia Thanon Bangla) dia foibe fialamboly any Patong momba ny. Phuket. Ny halavany amin'ity lalana ity dia 350 m.Mihazakazaka hatrany amin'ny morontsiraka izy io, manomboka eo akaikin'ny tobin'ny polisy, ary mifarana eo akaikin'ny toeram-pivarotana Jang Ceylon, izay ifanitan'ny Bangla Road amin'ny lalana Thanon Ratisit Songroipi. Bangla Road dia azo antsoina hoe analog Phuket momba ny lalana Pattaya Walking. Eto ianao dia afaka mahita fialamboly isan-karazany: ny trano fisakafoanana (ao anatin'izany ny McDonald's), trano fisakafoanana (anisan'izany ny fanatanjahantena, misy mozika mivantana ary fitsangantsanganana miaraka amin'ny mpivaro-tena), fivarotana fanomezana, disko, fampisehoana ho an'ny olon-dehibe.
(Antsipiriany bebe kokoa momba ny seho ho an'ny olon-dehibe any Pattaya sy Phuket - ETO)
Lehibe Bangla dia indroa toradroa amin'ny lalana Walking Street, ary mitovy ny halavany. Amin'ny 18 oktobra, mijanona eo ny fifamoivoizana, izany hoe ny làlana dia lasa mpandeha an-tongotra. Ao amin'ny faran'ny Bangla Road, izay manakaiky ny morontsiraka, dia misy ny fifanakalozana fifanakalozana sy ny fivarotam-bokatra (miaraka amin'ny vidiny ambonimbony). Efa ho 50 m ny mozika dia azo henoina na aiza na aiza ary afaka mahita transvestite miloko sy miboridana marobe ianao, manolotra ny olona rehetra haka sary miaraka aminy mandritra ny 100 baht.
Inona no mitranga amin'ny lalana bangla
Matetika ny mpanao majika dia mandamina fampisehoana eo amin'ny sisin-dalana, izay angonin'ireo mpijery. Amin'ny lafiny roa amin'ny Bangla Road dia mpivaro-tena manasa bara sy klioba. Mbola eto ihany, ny hodi-doko misy bokikely izay manolotra fampisehoana ho an'ny olon-dehibe (fantatra amin'ny hoe "fampisehoana Pussy" ary "fampisehoana Ping-pong"). Ny fampisehoana toy izany dia misy trika isan-karazany miaraka amin'ny taovam-pananahana (indrindra ny vehivavy) - ohatra, "tifitra" misy baolina ho an'ny tenisy latabatra, fandrehitra sigara iray, manaisotra rojo vy iray avy amin'ny toerana iray akaiky. Ireo fahitana ireo dia tsy mahafinaritra ho an'ny rehetra, izany hoe, azo lazaina fa am-boninahitra izy ireo. Matetika i Barker no nilaza avy hatrany fa ny dimy minitra voalohany azonao jerena maimaim-poana, dia raha tsy tianao izany dia afaka miala fotsiny ianao (ary raha tianao dia andoao ary jerena bebe kokoa). Marina izany, ka raha te-hahita fotsiny hoe manao ahoana ny fampisehoana toy izany ianao dia ajanony fotsiny mandritra ny minitra vitsy ary hivoahana. Mandritra izany fotoana izany, voarara mafy ny maka sary mandritra ny famelabelarana.
Prostitutes any Phukta
Maro ny vehivavy mijoro sy mandeha an-tongotra amin'ity làlana ity izay vonona handany takariva na alina miaraka amin'ny lehilahy iray. Manomboka amin'ny 1 baht ny vidiny.
Manintona olona hafa amin'ny lalambe Bangla ho an'ny mpizahatany: tovovavy mitafy tantanana, izay manome vola hialana aminy amin'ny fametahana fantsika anaty sambo. Saika tsy mitombina ny fandresena azy - tonga hatrany amin'ny fihodiny izy tamin'ny voalohany, nitondra azy tamin'ny satroka niaraka tamin'ny tsipoapoaka iray, raha toa kosa ny ankamaroan'ireo mpifanandrina aminy, namely ny hazo tamin'ny fametahana tantanana.
Rehefa fety, eo akaikin'io arabe io dia misy sehatra iray apetraka eo amoron-dranomasina ho an'ny mpihira sy ny mpandihy. Nandritra ny fetin'ny Thai Songkran, lasa toerana fialamboly izy ireo: ny mpizahatany no mitafy tena amin'ny basy milina rano ary mitifitra tsirairay avy.
Eny a. Tsy tena ara-dalàna io rehetra io, ary misy ny biraon'ny polisy aza eo am-bavan'ny arabe. Saingy toa somary sarotra be ihany ny zava-drehetra, satria miaina mandritra ny herintaona mahery izao.
Salama .. 18+
Hevero amin'ny sarintany - https: //goo.gl/maps/mQWAiEFZEUgR4s5h9
Bangla lalana (lalana Bangla), Thanon Bangla eo amin'ny sarintany
Làlana Bangla, Thanon Bangla. Sary sy horonan-tsary
Phuket Aquarium «Aquarium Phuket«
Ranomasimbe Phuket vaovao "Aquaria "
Bird Park "Paradisa vorona"
Ny hevitra momba ny Bangla Road (Google review)
Bangla reviews reviews (Tripadvisor.com)
Ilay toerana dia eo am-pelatanan'ny olona tia an'io vanim-potoana io. Ny ambiny tsy misy atao eto.
Amin'ny fahatongavan'ity lohahevitra ity any Thailand, ny anarany ihany no tavela ao amin'ny kolontsainany sy ny filozofia.